Otu esi eme ka akụkụ nylon dị ọnụ ala maka Bosch brushcutters - Ikkaro
Inicio >> Ndozi >> Otu esi eme ka edochi akara nịịlị dị ọnụ ala maka Bosch brushcutters
Otu esi eme ka edochi akara nịịlị dị ọnụ ala maka Bosch brushcutters
Nke a abụghị n'onwe ya mmezi, mana ntakịrị mbanye anataghị ikike iji chekwaa anyị ego. Ogwe aka Bosch dị oke ọnụ ma n'isiokwu a, m ga-egosi gị otu esi eji akara naịlọn site na ụdị ndị ọzọ na Bosch eletriki ahịhịa egbutusị.
Enwere m onye na-egbusi ọkụ eletrik Bosch AFS 23-37 1000 W nke ike. Ọ na-aga nke ọma. Obi dị m ezigbo ụtọ maka iji ọgwụ ike dị ka nke m chọrọ. Ọ bụ onye na-egbutu ọkụ eletrik, ọ bụghị batrị, ọ ga-ejikọ ya na ọkụ eletrik iji rụọ ọrụ.
Otú ọ dị, ika akara ukara nyon akụkụ ahụ dị oke ọnụ, kama dị nnọọ oké ọnụ ma na-arụpụtara ka i wee jiri na-eri ya akụkụ ahụ mapụtara. N'okwu a, eri naịlọn na-abịa n'ụdị bolt na etiti nke na-egbochi ya ịgbanahụ.
Ndi nọ na onyogho biara na igwe igwe 25 ngwungwu 10 nkeji nke 30cm nke ahụ bụ, € 25 maka mita 3. Ọ bụ ezie na eriri igwe na-efu anyị € 10 maka mita 60 ma ọ bụ 70. Enwere ọtụtụ ọdịiche.
Azutala m 2 ndia
3mm naịlọn eri
Y’oburu na inwere ike inwe jiri ihe ọ bụla ụdị nylon eri spools Ana m ahapụrụ gị ụzọ abụọ.
Ọ bụrụ na anyị ahụ akụkụ ahụ mapụtara, ha nwere obere alọt. Amaghị m ihe ga - eme ma ọ bụrụ na anyị etinye eriri ịkpụ ozugbo. Hụ ka ọ si enweta eche m na mgbe ọ jidere ya na ahịhịa ụfọdụ ọ ga-amị amị ma si n'isi. Ọ bụ ya mere anyị ga-eji jigharịa mkpọchi ahụ.
M na-ahapụ video na mgbanwe
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ usoro a usoro site na iji foto, lee ya.
Were ụfọdụ ichekwa imi imi, ma wepu nrụrụ ahụ. Ya mere, anyị nwere ike ịnweta eriri nke fọdụrụnụ
Naanị ị ga-ebipụ nke ọhụrụ, tinye ya ma pịa ọzọ ka ọ ghara ileghara.
Zụta isi ụwa
Ọ bụ nhọrọ ọzọ dị mma. Anyị zụtara ọzọ eluigwe na ala ma ọ bụ dakọtara isi na anyị igwe na anyị nwere ike ugbu a na-eji ụdị ọ bụla nke eri. Typesdị isi ndị a dị n'etiti € 5 na € 15.
N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịgbanwe gaa na eriri ọ bụla mgbe ọ bụla anyị chọrọ. Azụtala m nke a ọ bụ ezie na anwalebeghị m ya
Tinyere isi m zụtara 3,5mm braided waya yana mkpuchi waya waya iji nwalee etu o si arụ ọrụ n'ihi na echere m na ọ ga-eyi ọtụtụ obere.
A na m atụ ụjọ na ịbụ nchara nchara ụfọdụ ọkụ na-achọghị ga-awụli elu, mana mgbe m nwara m ga-agwa gị.
Onye na-egbutu ọkụ eletrik ọ bara uru?
Nke a bụ ajụjụ ọtụtụ mmadụ na-ajụ m onye m gwara na m zụtala eletriki.
Achọrọ m ịza nke a maka na ọ bụ ihe a na-ajụ m ugboro ugboro.
Azịza ya mgbe niile bụ na ọ dabere. Ọ dabere na ihe ị chọrọ. Aga m eji ya na ubi nke ide mmiri juru 2, ebe m nwere ike ijikọ ya na ndọtị na-enweghị nsogbu. Emechaa m were ya banye n’ụgbọala tinye ya n’ime kaboodu. A na-ekele ya na mmanụ na mmanụ adịghị ya, na ọ naghị anụ isi ma ọ bụ ezie na ọ dị ka nzuzu, enwere ekele na mgbe ị na-eji ya, ọ naghị eme mkpọtụ gabiga ókè.
Mana ị ga-ama ihe ịzụrụ, n'ihe gbasara ụdị ihe atụ a (Bosch ASF 23 - 37) ị kwesịrị ịdị na-eme ka nchekwa ahụ sie ike mgbe niile ka ọ rụọ ọrụ ọ na-abụ ihe na-agwụ ike. Ma ndị ọzọ zuru oke.
Ọ bụrụ na ịchọrọ igwe nwere ike nkịtị, ị ga-eji ya na gburugburu ebe ị nwere ike jikọọ ya na enweghị nsogbu na ịchọrọ ihe na-eme mkpọtụ na nke na-enweghị ntụpọ (ka ị ghara ihichapụ ụgbọ ala ma ọ bụ mgbe m debere ya n'ụlọ) Ọfọn, eletrik bụ nhọrọ kachasị mma gị.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ iburu ya ebe enweghị ọkụ eletrik, ịchọrọ nnukwu ike, karịa 1CV
Ọcha dị ọcha
Enweghị mkpa ịmara mmanụ mmanụ na mmanụ
Ọ nwere mgbe niile-ejikọrọ na ị hapụ nnwere onwe
Gaghị eji ya n’enweghị ọkụ eletrik
Enweghị ụdị dị ike dịka mmanụ ụgbọala
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ị nwere ike ịjụ m na nkwupụta Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka m gbasaa na isiokwu a, m nwere ike ịme ahịhịa cutter ịzụta ndu.
1 Tinyegharịa bolt
2 Zụta isi ụwa
3 Onye na-egbutu ọkụ eletrik ọ bara uru?